Xasuusta Xilli Uu Marxuun Cigaal Rabay Inuu Guryihiisii U Dambeeyay Ee Burco U Iibiyo Loollanka Siyaasadda: SidiI Ay Ku Badbaadeen 1993kii. W/Q Siciid Maxamud Gahayr | Berberatoday.com
Xasuusta Xilli Uu Marxuun Cigaal Rabay Inuu Guryihiisii U Dambeeyay Ee Burco U Iibiyo Loollanka Siyaasadda: SidiI Ay Ku Badbaadeen 1993kii. W/Q Siciid Maxamud Gahayr
March 22, 2020 - Written by Berbera Today
Xasuusta Xilli Uu Marxuun Cigaal Rabay Inuu Guryihiisii U Dambeeyay Ee Burco U Iibiyo Loollanka Siyaasadda: SidiI Ay Ku Badbaadeen 1993kii.
Habeenkii uu berri oo kale tegayay Boorama ayuu subixii ii yeedhey, wuxuu igu yidhi “Waxa aan tegeyaa Boorame, labadaa oday baad Burco u raacaysaa, guryihii Burco ku hadhay baad soo iibinaysaa”markaa labada oday waa Xaaji Siciid Cige iyo Cismaan Geeljire oo reer Berbera ahaa,
Waxa uu yidhi “Warqaddaas qaada odaygii ii abtiga ahaa u geeya, guryihii Burco siday u dhanyihiin waa la iibinayaa, waxaanad samaynaysaa lacagta adigaa qabanaya odayaashuna guri aanad ogayn ma iibinayaan”. Warqaddiina waxa uu u dhiibey Siciid Cige.
Markaa guryihii Berbera ee reer Xaaji Ibraahin Cigaal waxa loo aanaynayay oo iibiyey walaalkay Yuusuf Daaud, oo ololihii Alle ha u naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal ee u dambeeyey oo ahaa 1969kii uu ku yidhi “guryaha Berbera wada iibi” oo isna soo wada iibiyey.
Subaxii baan ku kallahay oo aan ku idhi, “Waar heedhe Maxamed dee guryihii waagii horena Yuusuf baa wada iibiyey baa la yidhi, ma waxaad doonaysaa in la yidhaahdo intanna Weli baa isna iibiiyey. Midda kale intaasaa hanti ummaddiiba u hadhee maad inaga deysid?”.
“Maya’e soo iibi” buu yidhi, waxaan ku idhi intaan u tilmaamay afar guri oo ka mid ah “afartaasaan kala hadhayaa”. Wuxuu yidhi “kala hadh oo inta kale soo iibi”. Dabeedna subaxii baanu saarnay diyaaradda, Boorame ayuu tegey.
Labadii oday ee Siciid Cige iyo Cismaan Geeljire, Burcay subaxiiba u baxeen, oo anna waxaan ku idhi “Sii socda, waan idinka daba imanayaa sayladda sii gala”. Kuma niyad samayn in guryaha la iibiyo, Maxamedna waan arkayaa isagu siyaasaddii buu ku maqanyahay.
Waxay yidhaahdeen “Ninkii Weli ma haynno”.
Deedna Fooniyaa la iisoo diroo, waxa ii yeedhey nin la odhan jirey Maxamed Jaamac oo fooniye haystey, waxa ila soo hadlay Alla ha u naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal, “Immika bax, odayaashii 15 cisho ayay ku sugayeene, hadda bax” buu yidhi.
“Waayahay” baan ku idhi, oo talaa igu caddaatay. Oday la odhan jirey Alle ha u naxariistee Maxamed Cabdiraxmaan (Luggooyo) oo Berbera joogey ayaan u tegey, arrintii baan uga warramay. Wuxuu igu yidhi “Ninkan wixiisa lagama horyimaaddee wixii uu ku yidhaahdo yeel oo wixiisa sidiisa ugu fuli”.
Waan tegey Burco, odayaashii baan ugu tegey. Waxaan la kulmey nin aanu ehel nahay oo la odhan jiray Maxamed Daahir Cabdi. Wuxuu igu yidhi “Maxaa idinku kallifey afartii cooshadood ee halkan ku hadhay inaad iibisaan?”. Isna wuxuu ku adkaysanayay aqalladaasi in aanay iib gelin”.
“Xaaji laguu warran, meeshii Burcaan tegey si aan guryihii usoo iibiyo, suuqaan xaalkiisa eegey. Waxaan arkay dadkii oo leh mar haddii Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaalba guryihiisii Burco wada iibinayo meeshii waxba ma yaallaan, oo nabaddii aanu islahayn way dhalanaysaa ma jirto, rejo ma taallay dhaheen reer Burco, markaa magaaladii ninkastaaba wuxuu yidhi gurigayii waa xaraash”
Intuu cirkaa u boodey ayuu yidhi “Ha seexannin caawa, gaadhigan aad wadatey dib u kaxayso, tag Burco odayaashi faraha ka qaada dheh” anna waa intaan doonayay. Odayaashii fooniyaan u diroo intaan Berbera tegey ayaan ku idhi “Hawshii waa la joojiyee, iska soo noqda”. Markaa dhawr iyo soddonkii guri sidii baan ku badbaadiyey. Ilaa maanta kuwii baa u qabyo ah. Waxa uu Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal yimi Hargeysa markii Madaxweynaha Somaliland loo doortay.
“Madaxweyne waan ogahoo Maxamed Xaaji Ibraahin wuu dhimanayaa, waxaan doonayaa in aan ogaado oo ka daba tago”. Wuxuu iigu jawaabay “Inaadeerkaa waad ogtahoo wuu i qabsanayaa”. Waxaan ku idhi “Kharashka anaa iska bixinaya keliya waxan kaa rabaa inaad fiise ii weydiiso safiirka inoo jooga South Africa ee Iqbaal”
Waxa uu iigu jawaabay “Inaadeerkaa waad ogtahoo wuu i qabsanayaa, ku siin maayo”. Markaa waxaad dareemaysaa sida ay cid waliba ula socotey in marxuunku aanu jeclayn qoyskiisu inay ku milmaan inta uu xilka hayo.
Aniga anigoo halkan jooga, wasaaradda maaliyadda oo aan xil hayn, ayaa maalin wasiirkii maaliyadda Md Maxamed Siciid Gees, ayuu subax shirkii golaha wasiirrada markii laga soo baxay ayaa nin uu malaa ku yidhi “i xasuusi”, uu ku yidhi Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal, “waakan Maxamed Siciid Gees”.
Markaasuu ku yidhi “Waaryaa Gees, saw ma ogid inuu inaadeerkay rumi kula shaqeeyo?” Markaasuu yidhi Gees “Kuma?” markaasuu yidhi “Weli Daauud Cigaal”. Markaasuu yidhi Gees “Haa”. Markaasuu yidhi “Berrito eri”. Markaasuu yidhi Gees “Dee madaxweyne waa shaqaale ninku, sideen u eryaa? Imitxaan buu galay,
Dabadeed markaasuu Gees u yeedhay nin la odhan jirey Xuseen Faarax Dooddi , oo halkan wasaaradda maaliyadda nagala shaqayn jirey. Markaasuu ku yidhi “Waar Xuseenow odaygii Weli buu haystaa bal hadda warbixin yar ka sii”.